Lines Ohere mepere paylines: ole ka i kwesiri igwu - 429jp.info
Lines Ohere mepere paylines: ole ka i kwesiri igwu
Ọ dị ka ndị mmepe oghere na-anwa ịpụ ibe ha kwa afọ site na ịhapụ igwe oghere nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke paylines. Nọmba a na-arị elu mgbe niile. Anyị ahapụwo ụbọchị nke oghere 1-payline n’azụ. Ọ bụ ezie na egwuregwu dị otú ahụ ka nwere ike ịchọta, ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịchọta oghere egwuregwu na-eji ọtụtụ narị, ọtụtụ puku, ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ narị puku paylines! Ma ka ndị ọzọ n’ezie hà ka mma? Ka anyị chọpụta.
Enwere ọnụọgụ ederede ederede egwuregwu?
Mgbe ị na-ahọrọ n’etiti oghere igwe, lelee ụgwọ ọrụ ha. Nke a na-enye nkọwa nke egwuregwu nke egwuregwu ga-agwa gị otú ọtụtụ paylines dị na nke nghazi ha na-akwụ. Buru n’uche na ị ga-etinye ebe ị na-eme otu nnukwu ego ọ bụla iji wee rụọ ọrụ nkwụnye ụgwọ ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-egwu maka ezigbo ego, nke a nwere ike iri ihe site na bankroll gị karịa ịtinye nzọ pere mpe. Yabụ, ị ga-ekpebi ma ọ bụrụ na ohere ị ga-enweta maka mmeri ga-aba uru dị elu.
Y’oburu n’inweta otutu ogugu n’u ego di oke nma bu ebum n’uche gi, gwuo egwuregwu n’egbochu otutu ndi edere ego. Kwesighi ịrapara na egwuregwu 1-payline. Ndị nwere 3-10 ga-emekwa. N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ohere kachasị mma maka mmeri, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-egwu oghere ndị na-aga n’ihu, gaa n’ihu wee kpọọ egwuregwu nwere akara dị elu.
Gini ka usoro ihe putara na igwe oghere?
Yabụ, anyị emeela ka o doo anya na ọtụtụ paylines na-enye gị ọtụtụ ụzọ iji merie. Ma gịnị kpatara ya? Y’oburu n’inweghi obi ike otu uzo igwe na igwe oghere si aru oru, anyi ghachu ya ya. A payline, nke a makwaara dị ka akara mmeri ma ọ bụ akara ịkụ nzọ, bụ nchikota akara nke ga-akwụ ụgwọ mgbe ha rutere na wiil. Na ọdịnala, paylines kwụ ọtọ ma na-akwụ ụgwọ site n’aka ekpe gaa n’aka nri. Typically ga-enwerịrị opekata mpe akara atọ jikọtara n’usoro iji nweta ụgwọ.
Igwuri egwu na otu oghere na-enye ndi na-agba chaa chaa ihe omuma karia, na-asọpuru ulo akwukwo ochie, egwuregwu egwuregwu. N’akụkụ aka nke ọzọ, ọtụtụ-payline oghere egwuregwu na-enye a ọzọ customizable na-akpali akpali ahụmahụ. Ikpokọta na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụzọ iji merie ndị ọzọ mgbakwunye, dị ka bonus egwuregwu, na i nwere kpam kpam ịrịba ịgba chaa chaa ahụmahụ.
Usoro na Ntụziaka
E nwere ọtụtụ dị iche iche nke cha cha oghere paylines:
Aka ekpe gaa aka nri Nke a bụ ụdị nke payline kachasị. Ihe ngosi kwesiri ibido site na aka ekpe wee wepu aka nri. Ikike gaa n’aka ekpe. Ntụziaka a abụghị ihe a na-ahụkarị. Ọ bụ nnoo dị iche na nhazi ekpe-gaa-akanri. Na-akwụ ayszọ Abụọ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ewu ewu dị ka paylines nke aka ekpe-aka nri, ụdị a juru ebe niile karịa nhazi usoro akanri-gaa-aka ekpe. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, Lezienụ egwuregwu abụọ ahụ akwụ ụgwọ akwụ ụgwọ na-aga site n’aka ekpe gaa n’aka nri na nke ọzọ. Wzọ niile. Na ụdị nke oghere egwuregwu, ị ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na i nwere a kenha akara na onye ọ bụla ukwu. Ọ baghị uru ebe akara ahụ dakwasịrị. Typesdị egwuregwu ndị a na-enye ọtụtụ ụzọ iji merie. Yọkọ ụyọkọ. Abịa na akara ga-etolite ụyọkọ iji kwụọ ụgwọ. Dịka, akara ndị ahụ ga-achọ imetụ aka na kwụ ọtọ, yana opekata mpe akara anọ dị ka akụkụ nke ụyọkọ. MegaWays. Egwuregwu MegaWays oghere na-enye ọtụtụ narị puku ụzọ iji merie! Redị ụdị egwuregwu a dị egwu, nke pụtara na ọnụ ọgụgụ oghere na agba ọ bụla dịgasị iche site na ntụgharị. Egwuregwu ndị dị otú a nwere ụzọ kachasị elu nke 117,649 iji merie.
Lelee mgbakọ na mwepụ n’okpuru:
7 x 7 x 7 x 7 x 7 = 117,649
Ebee ka m nwere ike igwu egwu cha cha cha cha na paylines?
Dịla njikere ịmalite igwu egwu egwuregwu ịgba chaa chaa n’ịntanetị maka ezigbo ego? Ọ bụrụ otu a, bia lee ọbá akwụkwọ cha cha cha cha cha cha! You’ll ga-ahụ ụdị ụdị payline ị pụrụ ichetụ n’echiche. Ma ị chọrọ obere ọnụ ọgụgụ paylines, maọbụ ọ bụrụ na ịchọrọ igwu egwuregwu na ọtụtụ ụzọ iji merie, anyị ekpuchiela gị. Anyị na-enyekwa ndị na-agba chaa chaa ọhụrụ onyinye mmesapụ aka, ebe ha nwere ike ịnweta mkpụrụ ego na-enweghị ego na ego ọzọ iji soro nke anọ mbụ ha. Bịa debanye aha maka akaụntụ taa wee nwaa aka gị n’ịgba chaa chaa n’ịntanetị!
사이트 whу ị shоuld nоt desert lаnd bаѕеd cаѕinо
Uru nke casinos casinos karịrị casinos ọdịnala
Jackpot Party Rebrands dị ka Ohere mepere Magic na SkillOnNet